Dagaallo saaka ka soconaya magaalada Sancaa ee dalka Yaman. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dagaallo saaka ka soconaya magaalada Sancaa ee dalka Yaman.
On Dec 2, 2017 185 0
Wararka ka imaanaya saaka oo sabti ah magaalada Sancaa ee caasimadda dalka Yaman waxay ku waramayaan in magaaladu ay dib ugu soo cusboonaadeen dagaallo u dhexeeya malleeshiyaadka shiicada Xuuthiyiinta iyo kuwa Cali Cabdalla Saalax.
Dagaallada oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waxay ka soconayaan xaafada Al-Siyaasiyah iyo laamiga Aljazaa’iriyiin oo ah meel aad u dad badan.
Labada dhinac waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa ku rakiban gawaarida dagaalka.
Saraakiil u hadlay Cali Cabdalla Saalax waxay sheegayaan in dagaalladu ay ka soconayaan meel u dhow guri uu deganyahay wiil uu dhalay Cali Cabdalla Saalax, ahana taliyaha guud ee malleeshiyaadka Saalax.
Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay in dagaalku soo cusboonaaday kadib markii uu fashilmey wadahadalo maalintii shalay oo jimco ah ka dhacay magaalada Sancaa, kaas oo lagu doonayay in lagu dhameeyo khilaaf soo kala dhex galay Xuuthiyiinta iyo Cali Cabdalla Saalax, balse kulamadaas fashil ayay kusoo dhamaadeen.
Dagaalladan saaka ka soconaya Sancaa waxay daba socodaan dagaal dhacay todobaadkii aynu sooo dhaafney bartamihiisa, kaas oo lagu dilay 14 Ruux oo Xuuthiyiinta iyo kuwa Cali Cabdalla Saalax isugu jira, wuxuuna dagaalkan yimid kadib markii labada dhinac ay isku qabsadeen maamulka masjid weyn oo ku yaala Sancaa, kaas oo shiicadu doonayeen iney ku dhigtaan waxa loogu yeero Mowliidka oo ah bidco aan diinta Islaamka lug ku lahayn, sida culimada rabaaniyiintu sheegeen.